सम्पादकीय टीम | यात्रा समाचार
Actualidad Viajes एक Actualidad ब्लग वेबसाइट हो। हाम्रो वेबसाइट समर्पित छ यात्रा को संसार र यसमा हामी मूल गन्तव्यहरू प्रस्ताव गर्दछौं जबकि हामी यात्राको बारेमा सबै जानकारी र सल्लाह प्रदान गर्ने इरादा राख्छौं, विश्वका विभिन्न संस्कृतिहरू र उत्तम प्रस्तावहरू र पर्यटक गाइडहरू। धेरै धेरै वर्षसम्म हामी एक उत्पादन यात्रा पोडकास्ट जसमा निकै महत्त्वपूर्ण सफलता थियो, प्राप्त गर्दै यूरोपीय पोडकास्ट अवार्डमा पहिलो स्थान स्पेनमा व्यापार वर्गमा र चौथो यूरोपमा वर्ष २००० मा साथै वर्ष मा एक फाइनल हो 2010 y 2013.
Actualidad Viajes को सम्पादकीय टीम बनेको छ भावुक यात्रीहरू र सबै प्रकारका ग्लोब्रोटरहरू तपाईं संग तिनीहरूको अनुभव र ज्ञान साझा गर्न पाउँदा खुशी छ। यदि तपाईं पनि यसको अंश बन्न चाहनुहुन्छ भने, नहिचकिचाउनुहोस् हामीलाई यो फारम मार्फत लेख्नुहोस्.
म बच्चा भएको हुनाले मलाई अन्य ठाउँहरू, संस्कृतिहरू र उनीहरूका मानिसहरूलाई जान्न मन पर्छ। जब म यात्रा गर्छु म शब्दहरू र छविहरूको साथ पछि व्यक्त गर्न सक्षम हुन नोटहरू लिन्छु, त्यो गन्तव्य मेरो लागि के हो र यो मेरो शब्दहरू पढ्ने जो कोहीको लागि हुन सक्छ। लेखन र यात्रा उस्तै हो, मेरो विचारमा ती दुबैमा तपाईंको दिमाग र मुटु लिन्छन्।
मेरो अनुभव दुनिया भर मा साझा गर्नु र यात्रा को लागी मेरो जोश फैलाउनु को लागी माया गर्छु। अन्य शहरहरूको चलन र साहसिक कार्य पनि थाहा पाउनुहोस्। त्यसैले यी मुद्दाहरूको बारेमा लेख्नु, यसलाई सामान्य जनताको नजीक ल्याएर, मलाई सन्तुष्टिले भर्दछ।
म सधैं संसार भर बाट भाषाहरु को बारे मा भावुक छु। एक अ teacher्ग्रेजी शिक्षक को रूपमा, म पनि ती विभिन्न भाषाहरू वा बोलीलाई पहिलो हात जान्न चाहान्छु। प्रत्येक यात्रा म एक नयाँ शिक्षा हो जुन म आजीवन सम्झना गर्दछु।
विज्ञापनमा स्नातक, म नयाँ कथाहरू र ठाउँहरू लेख्न र पत्ता लगाउन चाहन्छु जबसम्म म याद गर्न सक्छु। यात्रा मेरो इच्छाको एक हो र यसैले म ती स्थानहरूको बारेमा सबै जानकारीहरू फेला पार्न खोज्छु जुन म एक दिन हेर्न आशा गर्दछु।
तिनीहरू भन्छन कि त्यहाँ यति धेरै प्रकारका यात्रीहरू छन् जस्ता मानिसहरू संसारमा छन्। मेरो यात्राको क्रममा म रूचीको विविधताको बारेमा सचेत भएँ जुन हामीले चलाउन सक्छौं, त्यसैले वास्तविक अलिडाड भ्याजेसमा म तपाईंलाई विश्वको कुनै पनि कुनामा तपाईंको छुट्टीहरूको पूर्ण आनन्द लिन आवश्यक जानकारी दिनेछु।
मलाई लाग्छ कि यात्रा भनेको एक धनी अनुभव हो जुन एक व्यक्ति बाँच्न सक्छ ... लाज, त्यो पैसा यसको लागि आवश्यक छ, हैन? म चाहन्छु र म यस ब्लगमा सबै प्रकारका यात्राहरूका बारेमा कुरा गर्न जाँदैछु तर यदि मैले केहिलाई महत्त्व दिन गइरहेको छु भने, ती गन्तव्यहरू हुन् जुन म अगाडि भाग्य छोड्दै जान्छु।
म सानो भएको हुनाले म सँधै यात्रा गर्न चाहन्थें र अलि अलि एउटा अथक यात्री बन्न म सक्षम छु। मेरो मनपर्ने गन्तव्यहरू: भारत, पेरू र अस्टुरियस, यद्यपि त्यहाँ अरू धेरै छन्। मलाई मनपर्ने भिडियोमा रेकर्ड गर्न मन पराउँछु र उसको फोटोहरू लिने सबै भन्दा माथि ऊ मानिन्छ कि ऊ जापानी हो। मलाई मनपर्दो ठाउँको परम्परागत ग्यास्ट्रोनोमी प्रयोग गर्न मन पराउँछु र मलाई केहि रेसिपीहरू र सामग्रीहरू ल्याएर घरमा ल्याउन र सबैसँग साझा गर्नुहोस्।